News Collection: नेपालसँग डिसेम्बर कनेक्सन !
नेपालसँग डिसेम्बर कनेक्सन !
कोमल नाहटा, मुम्बई १९ पुस,
गत सोमबार (डिसेम्बर २६)मा इटीसी बलिउड बिजनेसमा भनिएको तथ्यहरू गलत भएको भन्दै यसले नेपाली नागरिकहरूबीच आक्रोश पैदा गर्‍यो । मैले सिनेमा ‘डन २’को अल इन्डिया ब्यापारबारे कुरा गर्दा ‘...नेपाली भूभागलाई पनि नबिर्साै, नेपाली भूभाग पनि भारतीय क्षेत्रअन्तर्गत नै पर्छ....’ भनेको थिएँ । वास्तवमै मैले ओभरसिज नभएर भारतीय सिनेमा बिजनेसमा नेपाली सिनेमा ब्यापार संलग्नताको कुरा गरेको थिएँ । नेपालका केही व्यक्तिहरू यस च्यानल र त्यसका होस्ट (संचालक)प्रति गलत रवैया र नाटकीयरुपमा क्रुद्ध थिए ।
उनीहरूले बुझ्नुपर्छ –कसरी यो होस्टले नेपाल भारतीय भूभागमा पर्छ भन्न सक्छ ? उनीहरूले अर्थ र सन्दर्भ नबुझिकनै कमेन्ट गरे । वास्तवमा मैले भारतीय सिनेमाको ब्यापारको बारेमा कुरा गरेको थिएँ, राष्ट्रियताको सवालमा होइन ।
सिनेमा ब्यापारमा नेपाल भारतीय ब्यापारमा क्षेत्रमा थपिन्छ
जसले विवाद सिर्जना गरे, उनीहरूलाई यो थाहा थिएन कि नेपालको सिनेमा ब्यापार बलिउडको घरेलु ब्यापार क्षेत्र अन्तर्गत नै पर्छ भनेर । रिसाएका छिमेकी देश नेपालका कतिपय नागरिकहरूले मलाई किन सो होस्टले बेलायत, अमेरिका र दुबई पनि भारतअन्तर्गत पर्दैन भनेर सोधेका थिए । पक्का हो, भारतीय सिनेमाको ब्यापारको कुरा गर्दा अमेरिका, बेलायत र दुबईको ब्यापार जोडिदँैन । यद्यपी, यो विवाद यतिबेला सेलाइसकेको छ र नेपालका अन्य सिनेमा दर्शकहरूले मैले भन्न खोजेको ब्यापारको कुरालाई राम्रोसँग बुझेका छन् ।
नेपालसँगको डिसेम्बर कनेक्सन
संयोग नै भन्नुपर्छ, दिल्ली टाइम्स र टाइम्स अफ इन्डियाले मैले ट्वीटेको प्रष्टीकरणलाई ३० डिसेम्बरका संस्करणहरूमा प्रकाशित गरे । यससँगै, बलिउडका माधुरी दीक्षित र ऋतिक रोशन नेपालसँगको कन्ट्रोभर्सीको सम्बन्धको केन्द्रमा छन् । सन् १९९८ मा माधुरीले नेपाल भारतको भुभाग हो भनेपछि माफी मागेकी थिइन् । अनि सन् २००० मा ऋतिक रोशनले आफूले नेपाल र नेपालीलाई घृणा नगरेको भनेर प्रष्टीकरण दिएका थिए । संयोगवश माधुरीको स्टेटमेन्ट २२ डिसेम्बरमा सार्वजनिक भएको थियो भने २५ डिसेम्बरमै नेपाली युवाहरू ऋतिकसँग रिसाएका थिए । मैले बोलेको कन्ट्रोभर्सी पनि २६ डिसेम्बरमा प्रसारण भएको थियो । डिसेम्बरमा अर्को के भएको थियो ? ४० वर्षअगाडि धर्मेन्द्रले पनि यस्तै विवादमा डिसेम्बरमै नेपालीसँग माफी माग्नुपरेको थियो ।